Thwebula Sticky Password 8.2.3.43 – Vessoft
WindowsUkuphephaAbaphathi bephasiwediSticky Password
Isigaba: Abaphathi bephasiwedi
Ikhasi elisemthethweni: Sticky Password
Iphasiwedi enamathelisi – isofthiwe yokugcina amaphasiwedi nolwazi lomuntu siqu kwi-database yekhodi. Isofthiwe inikeza ukudala iphasiwedi enkulu esetshenziselwa ukufinyelela kwisitoreji se-akhawunti yamawebhusayithi kanye nezinhlelo zokusebenza. Iphasiwedi eqinile ingagcwalisa ngokuzenzekelayo amafomu ewebhu webude obuhlukile kunoma yiziphi izinsiza ze-intanethi. Isofthiwe ivumelanisa idatha ngokusebenzisa amaseva ayo amafu noma i-Wi-Fi yomsebenzisi wendawo, futhi isitoreji sephasiwedi yangakini siqinisekisa ukuthi idatha yomuntu siqu ayibonakali kwi-intanethi. Iphasiwedi enamathelayo inezici zamanothi akho asekela amathempulethi ahlukahlukene ukugcina ulwazi mayelana nekhadi lesikweletu, i-akhawunti yasebhange, ilayisensi yokushayela, ipasipoti, njll. I-Sticky Iphasiwedi iqukethe i-generator yephasiwedi esisiza umsebenzisi ukuba enze iphasiwedi eqinile ngobude obufanele kusuka kwiqoqo elithile labalingiswa, njengezinhlamvu ezivamile, amamaki okubhala nezibalo.
I-Autocomplete yamafomu wewebhu eside
Ukugunyazwa ngokuzenzekelayo ku-software nakuwebhusayithi
Ifu nokuvumelanisa kwendawo
Thwebula Sticky Password
Amazwana ku Sticky Password
Sticky Password software ehlobene
Isofthiwe yokuwuthola input idatha akhawunti yakho ngokugcwalisa amafomu ewebhu ngokuzenzakalelayo. Isofthiwe igcwalise ifomu ngokuchofoza okukodwa.
I-KeePass – umphathi wamaphasiwedi nedatha eyimfihlo. Isoftware isebenzisa i-algorithm ekhethekile yokubhala ngemfihlo yemininingwane egciniwe.
I-Dashlane – umphathi wephasiwedi wokugcina imininingwane eyimfihlo yomsebenzisi futhi ngokuzenzakalelayo agcwalise ama-webforms ngamaphrofayli omuntu siqu.
I-BullGuard Premium Protection – isethi ephelele yamathuluzi okuphepha ukumelana nezinsongo eziku-inthanethi, izivikele ku-malware futhi ivikele ukungena ngaphakathi kwinethiwekhi yasekhaya.
I-Dxtory – isoftware esebenza ngokuthwebula ividiyo kusuka esikrinini sakho sekhompyutha. Isoftware ifaka ama-algorithms akhethekile avimbela umthelela ijubane lezinhlelo zokusebenza ngesikhathi serekhodi labo.
Isofthiwe multifunction shoka Izivumelwano zokwengamela popular ukushintshanisa imiyalezo nabangani bakho kanye nezinye abasebenzisi emhlabeni wonke.